Ndingaita Sei Kuti Ndidzikire Muviri? | Vari Kuyaruka
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Moore Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuBrazil Myanmar Norwegian Nzema Ossetian Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tsonga Turkish Turkmen Twi Ukrainian Umbundu Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Bhaibheri rinokurudzira kuti munhu ave ‘ netsika dzine mwero. ’ (1 Timoti 3:⁠2) Izvozvo zvinosanganisira madyiro aunoita. Wadii kumboedza zvinotevera?
Kana waguta chirega kuramba uchidya. Musikana anonzi Julia ane makore 19 anoti: “ Ndaiwanzoyera chikafu chandaifanira kudya, asi iye zvino ndinomira kudya pandingonzwa kuti ndaguta. ”
Usadya zvokudya zvinogona kukanganisa utano hwako. “ Pandakangomira kunwa madrink anoti ukaavhura anotutuma, ” anodaro Peter, ane makore 21, “ muviri wangu wakadzikira nemakirogiramu 5 mumwedzi mumwe chete! ”
Gadzirisa madyiro aunoita. “ Kana ndapedza kudya chikafu chandinenge ndinacho handiwedzeri chimwe, ” anodaro Erin musikana ane makore 19.
Zvingakubatsira Kuti Ubudirire: Kana nguva yako yokudya yakwana idya! Ukarega kudya nguva yaunofanira kudya, zvichaita kuti unyanye kunzwa nzara wopedzisira wava kudya zvakawandisa.
Ichokwadi kuti variko vamwe vanhu vanoti “Ndinoda kuti muviri wangu udzikire” asi ivo vachiva nemuviri wakanaka. Asi ungaita sei kana uchida kudzikira muviri? Musikana anonzi Catherine anoti:
“Ndichiri kuyaruka ndaiva ndakafuta, uye ndaisazvifarira. Ndaisafara nezvaiva zvakaita muviri wangu!
“Nguva nenguva, ndaiedza kuita kuti ndidzikire muviri nekusadya chimwe chikafu, asi ndairamba ndichiwedzera kufuta. Saka pandakanga ndava nemakore 15, ndakaona kuti ndaitofanira kushanda nesimba kuti ndidzikire muviri. Ndaida kushandisa nzira yakanaka iyo yandaizongoramba ndichishandisa kweupenyu hwangu hwose.
“Ndakatenga bhuku raitaura nezvezvokudya zvine utano uye zvokuita maekisesaizi, uye ndakatanga kushandisa zvandaiverenga. Ndakatsidza kuti kunyange ndikaona senge ndiri kukundikana handisi kuzombokanda mapfumo pasi.
“Zvakashanda ufunge! Pakapera gore muviri wangu wakanga wadzikira nemakirogiramu 27. Atova makore maviri ndiine uremu hwandinoda. Handina kumbofungidzira kuti zvichaita!
“Kugadzirisa madyiro hakusi iko chete kwakandibatsira asiwo kuchinja kwandakaita mararamiro angu.”​—⁠Catherine, 18.
Utano Rugare Uye Mufaro Vechiduku Vanobvunza Kuti Vari Kuyaruka